बुटवलमा अस्पताल लैजाँदै गर्दा कोरोना संक्रमितको मृत्यु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बुटवलमा अस्पताल लैजाँदै गर्दा कोरोना संक्रमितको मृत्यु
आश्विन २८, २०७७ सन्जु पौडेल
तिलोत्तमा — बुटवलमा बुधबार अस्पताल लैजाँदै गर्दा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । नवलपरासी पश्चिमको सुनवल–४ का ७७ वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान कोरोना विशेष अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले बताए ।
असोज २५ गते स्वास्थ्यमा समस्या भई बुटवलको चौराहा अस्पतालमा ल्याइएका उनलाई २६ गते बिहान लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल रिफर गरिएको थियो । त्यहाँ गरिएको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि फिभर क्लिनिकमा उपचार गरिएको थियो । उनलाई राति थप समस्या भएपछि कोरोना अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको डा. गौतमले जानकारी दिए । अस्पतालका अनुसार ती व्यक्तिमा मुटुरोगको समस्या थियो ।
प्रकाशित : आश्विन २८, २०७७ ०८:०८
विश्‍वकप छनोट : उत्कृष्ट 'कमब्याक' मा अर्जेन्टिना र ब्राजिल विजयी
मोन्टेभिडियो — दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनोटमा अर्जेन्टिना र ब्राजिलले उत्कृष्ट पुनरागमनमा मंगलबार जित निकालेका छन् । अर्जेन्टिनाले बोलिभियालाई २–१ ले हरायो भने ब्राजिलले पेरुमाथि ४–२ को जित दर्ता गर्‍यो ।
त्यसमा नेमायरले ह्याट्रिक गरे । बोलिभियाले मार्सेलो मोरेनोको गोलले अग्रता लिएयता लउटारा मार्टिनेजले बराबरी गोल फर्काए । खेल सकिन ११ मिनेट अगाडि ज्याक्विन कोरेआले निर्णायक गोल गरे ।
ब्राजिल भने पेरुसँग दुई पल्ट पछाडि परेको थियो । पेरुले सुरुमा आन्द्रे करिलोले गोल गरेपछि नेयमारले पेनाल्टीबाट बराबरी गोल फर्काए । रेनाटो टपाआले पेरुलाई दोस्रो पल्ट अग्रता दिलाए । त्यसपछि ब्राजिलका तर्फबाट रिचार्लिसन एक र नेयमारले दुई गोल गरे ।
नेयमारको दोस्रो गोल पनि पेनाल्टीबाट नै सम्भव भएको थियो भने अन्तिम गोल इन्जयुरी समयमा निस्केको थियो । दिनका अन्य खेलमा इक्वेडरले उरुग्वेलाई ४–२ र पाराग्वेले भेनेजुएलालाई १–० ले पराजित गरेको छ ।
दक्षिण अमेरिकी समूहमा रहेका १० टिममध्ये शीर्ष ४ टोली कतार विश्वकप-२०२२ मा सोझै छनोट हुनेछन् भने पाँचौं स्थानमा रहने टिमले अन्तरक्षेत्रीय प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ ।